Nbudata Badoo 5.11.4 – Vessoft
Download malitere, сheck ihe nchọgharị gị na download window. Ọ bụrụ na e nwere nsogbu ụfọdụ, pịa bọtịnụ Otu oge, anyị na-eji dị iche iche download ụzọ.
Wụnye site Google Play
Ọrụ usoro: Android
Ikike: Kennwere enwe
Review fim bụ maka:
Badoo – a software ikwurịta okwu na-ewu ewu na-elekọta mmadụ na netwọk na ọrụ gburugburu ụwa. The software-enye gị ohere ikwurịta okwu na chat, òkù ọrụ izute, echiche na peeji nke ọbịa, nyochaa photos, wdg The peculiarity nke Badoo bụ ikike chọta ọrụ nso gị ugbu a ebe site na iji geolocation. The software na-enyere ịchọ ọrụ site gosiri parameters na ọdịmma na họrọ mpaghara. Badoo nwere ngwaọrụ hazi software maka mkpa nke ọrụ.
Adaba familiarity na ọrụ
Nkwurịta Okwu na chat
Search nke ndị ọrụ na gburugburu
Ilele nke na peeji nke ọbịa
Badoo Metụtara software:
Social netwọk Ngwá ọrụ na-microblog na mgbanwe ozi na-ewu ewu na-elekọta mmadụ na netwọk. The software-enye gị ohere ele ma kwuo na ndetu.
Social netwọk The free ngwa ndị kasị ewu ewu na-elekọta mmadụ na netwọk. The software enyere ele na ike dị iche iche ọdịnaya nke bụ ugbu a na-elekọta mmadụ na netwọk.
Social netwọk Nkata Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ozi na-ekwurịta okwu na ọrụ gburugburu ụwa. The software na-akwado ndị mgbanwe nke faịlụ nke dị iche iche na nkwurịta okwu na ìgwè chats.
English, Українська, Français, Español... Facebook Messenger 109.0.0.24
Social netwọk Nkata The mfe iji ozi ahụ iji kpọtụrụ enyi si na-ewu ewu na-elekọta mmadụ na netwọk. The software na-akwado olu na video oku na-video ogbako mode.
Social netwọk Photo The software ịnọ na otu nke kasị gara mmadụ netwọk na ụwa. Ngwa nwere otutu graphic mmetụta na nzacha maka irè ọrụ na foto.
Maps Social netwọk The navigation software nke na-arụ ọrụ ụkpụrụ nke mmadụ netwọk nyochaa dị iche iche n'ụzọ ihe ndị mere na ozugbo.
Social netwọk The software ka ohuru na gụgharia video ke netwọk gị igwefoto na ngwaọrụ ma ọ bụ na-agagharị ọzọ na-agbasa ozi gburugburu ụwa.
Social netwọk The ukara ngwa nke na-ewu ewu na-elekọta mmadụ na netwọk na-ebipụta ma na-ele na blọọgụ. Ọzọkwa software na-akwado ndị playback na mgbanwe nke dị iche iche mgbasa ozi faịlụ na ederede ndia.
Social netwọk The fechaa version nke na-ewu ewu na-elekọta mmadụ na netwọk ahịa nke na-erepịakwa kacha nta usoro ego na stably na-arụ ọrụ na netwọk na-adịghị ike njikọ.
Social netwọk Photo The software jikwaa a na-elekọta mmadụ na netwọk nke a na-edebere ndị na-arụ ọrụ na collections nke dị iche iche ihe oyiyi na foto. The software nwere ọtụtụ ntọala maka adaba akara nke a onye ọrụ profaịlụ.
Webcams Voice nkwurịta okwu Ngwá Ọrụ maka nkwurịta okwu n'etiti ndị ọrụ n'ụwa nile. The software na-enye ohere ka olu na video oku ma ọ bụ ịkọrọ ozi ederede.
English, Français, Español, Deutsch... Skype 7.22.0.322
Webcams Voice nkwurịta okwu A na-ewu ewu software maka free olu nkwurịta okwu na mgbanwe nke ozi ederede n'etiti ọrụ. Ọzọkwa software enyere na-akpọ na mobile na landline ntị na mma tariffs.
Ndị ọzọ na- The adaba ngwá ọrụ iji tọghata olu. The software na-eji ọtụtụ mmetụta iji tọghata ozi olu na e ikike ka a zọpụta faịlụ dị ka ringtone.
English, Українська, Français, Español... Camfrog 5.2.5231
Webcams Na-ewu ewu video chat na-ekwurịta okwu na ọrụ gburugburu ụwa. The software na-enye ohere ka ị nọrọ n'out oge na ọtụtụ chat ụlọ na-ekwurịta okwu na mode nke videoconference.
nhazi The software ike na-ele ihe aga-eme anatara, ya na ndị dị iche iche ihe. The software-enye gị ohere n'ụzọ dị irè na-eme atụmatụ nhazi oge nke affaires banyere gị onwe gị ọrụ.
English, Українська, Français, Español... Lee ihe software
Lee ihe software